Yintoni i-HTML Text Extractor? - Semalt Review
I-extractor ye-HTML yindlela elula yokujonga nokugcina itekisi yephepha lewebhu. Ngesi sixhobo, unokwenza iifayile ze HTML kwaye ufumane ulwazi olunentsingiselo kwimizuzwana. Ukuba udidekile ngenxa yokuba isayithi ayinakukhethiweyo isicatshulwa kwaye sifuna isisombululo esifanelekileyo, isicatshulwa se-HTML sinokukhetha.
I-extractoric ye-HTML inezinto ezininzi. Ezinye zazo zixoxwa ngezantsi.
1. Ukulungelelaniswa ngabaprogram
Kubafundi nabangewona program, i-extractor ye-HTML izakukhupha iikhowudi kunye neetekisi kwiphepha lewebhu elifunwayo.Akudingeki ukuba ube nezakhono zocwangciso ukusebenzisa le sixhobo. Kunoko, ufuna ulwazi oluyisiseko lwe-HTML kunye nePython ukuze wenze umsebenzi wakho wenze. Esi sixhobo asifanelekanga kuphela kubaprogram kodwa nakwamashishini, ukuqala, iintatheli, kunye nabafundi.
2. Umcwangcisi wetekisi we-HTML kumyili wewebhu
Umyili we-designer unoxanduva lokudala izinto ezintle kunye namakhasi ewebhu abumbayo abathengi bakhe. Ukuba ungumyili wezobugcisa webhsayithi kwaye unenombolo enkulu yeefayile ze-HTML ukukhishwa, kufuneka uzame i-HTML yocutshulwa yombhalo. Esi sixhobo siqinisekisa ukhuseleko lwakho kunye nolwangasese kwi-intanethi, kukufumana idatha echanekileyo. Ukongezelela, iqokelela ize ikhuphe ulwazi oluvela kwimifanekiso nakwividiyo, okwenza kube lula kuwe ukwenza izinto ezizenzekelayo.
3. Ikhompyutheni yesicatshulwa se-HTML kuyo yonke inkqubo yokusebenza
Enye yeempawu ezahlukileyo kwi-HTML yocutshulwa yombhalo kukuba iyasebenza kwiinkqubo zonke zeWindows. Ngaphezu koko, esi sixhobo sinokudibaniswa naziphi na iziphequluli zewebhu kwaye zininzi kubasebenzisi be-Windows 98, Me, 2000, NT, Vista, XP, kunye ne-8. Iyakucima ifayile yakho kwaye iyakususa icatshulwa kwifomati efundekayo.
4. Yakha kwaye ilawula ama-ejenti kunye neempendulo
Nge-extractor ye-HTML, i-webmasters inokudala iphinde ilawule zombini izikripthi kunye nabashenxi ngokulula. Iyakwenza izenzo zokulungisa utshintsho lula kwaye yenza imisebenzi eyahlukahlukeneyo yabasebenzisi bayo.
5. Unokuguqula idatha engaqinisekanga kwiinkcukacha ezisebenzisekayo
Ngekhompyutheni yesicatshulwa se-HTML, unokuguqula idata engaqinisekanga ukuze usebenzise ulwazi olufanelekileyo nolwaziweyo. Awudingi naluphi na ubuchule bokufunda ukusebenzisa le sixhobo. Kuya kuqala ukutshekisha amaxwebhu akho e-HTML kwaye iza kunika ubuncinane ama-templates angama-40 okukhethayo, okwenza kube lula ukuba ungenise idatha yakho.
6. Okulungileyo kwiiwebhsayithi zeendaba
I-New-York Times, i-CNN, i-BBC kunye neWashington Post ngamanye amajelo eendaba ezidumileyo. Ngekhompyutheni yombhalo we-HTML, unokukhipha idatha kulezi ziza kalula. Iya kukunika iziphumo eziphezulu kwaye ilungise zonke iiposiso ezinkulu kunye ezincinci kalula. Ngeli sixhobo, unokwenza umxholo womgangatho kwaye ushicilelwe kwiwebhusayithi yakho kwiziko eliphezulu lokusesha injini.
7. Izicwangciso zokuhlawula i-Flexible
Ekugqibeleni kodwa kungengona mncinci, i-extractor ye-HTML itekisi ifanelekile ukuba iqalise ukuqala kwaye iza nezicwangciso zeprayim. Ngokomzekelo, unokhetha isicwangciso saso esisisiseko ukuba unablogi yangasese kwaye awukwazi ukuthenga amaxabiso amanani. Isicwangciso esisisiseko siya kuhlawula i-R20 20 ngenyanga kwaye uvula imithwalo yempawu kunye nezinto ozikhethayo. Nangona kunjalo, ityala layo lemihla le-14 lifumaneka kwakhona Source .